अध्ययन भन्छः स्लिम केटीहरूको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा बढी खुसी हुन्छन् । यसरि ? —
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०४:११ admin	0 Comments
यो पनि पढ्नुहोस ! ‘ए मेरो हजुर ४’ को क्लाइमेक्स दृश्य टिकटकमा भाइरल हुँदै
चलचित्रका निर्माता सुनिल कुमार थापाले यो कुराको गुनासो गरेका छन् । उनले चलचित्रको छायाङ्कनलाई गोप्य राख्नको लागि नै डेढ दर्जन प्राविधिक खटाएको तर त्यति गर्दा गर्दै कसैले कतैबाट भिडियो खिचेर भाइरल बनाइदिएको गुनासो पोखेका छन् । सुनिलले नेपालमा चलचित्र छायाङ्कन गर्नको लागि आफ्नो स्टुडियो नभएकाले यस्तो समस्या निम्तिएको बताएका छन् ।
यो पनी पढ्नुहोस्ः वर्षौँपछि दिलीप र निरूताको भेट, रसाए निरूताका आँखा (भिडियो)
नायिका निरुताले यो कुरा आफै स्वीकार गरेकी छन् । दर्पण छाँयावाट हाम्रो जीवनमा नयाँ मोड आयो । त्यो हाम्रो लाइफकै टर्निगं प्वाइन्ट थियो, उनले एक अन्तरवार्ताका क्रममा भनेकी छन्, हामी विभिन्न रूपमा परिचित भयौँ ।
यसै क्रममा दिलीपले भने, तपाईँलाई नराम्रो देख्ने मान्छे अहिले सम्म भेटेको छैन । तर निरुताले भने दिलीपलाई भेटे भने अब गाली गर्छु भनेर आएको थिए । म गाली गर्छु । उनले दिलीपले आफूलाई मेन्टेन नगरेको देख्दा रिस उठेको बताएकी छन् ।
त्यती राम्रो नाच्ने, कलाकारीता गर्ने मानिसले आफुलाई मेन्टेन नगरेको देखेर मलाई दुख लागेको छ, निरुताले यसो भन्दा दिलिपले रमाइलो पाराले भने म त खादा पनि लुकेर खानु परेको थियो । भिडियो हेर्नुहोस्ः
यो पनी पढ्नुहोस्ः चलचित्र ‘प्रेम गित ३’ भारतमा पनी रिलिज हुने
काठमाडौं – फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ भारतमा रिलिज गरिने भएको छ । अभिनेता प्रदीप खड्का र क्रिस्टिना गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्म भारतमा रिलिज गर्ने तयारी गरिएको फिल्म निर्देशक सन्तोष सेनले बताए ।
← अष्ट्रेलिया फर्कन पाउँ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा गुहार
आज विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् आजको विनियमदर →
जस्ले विवाहको वर्षगाँठमा श्रीमतीलाई दिए चन्द्रमामा २३ रोपनी जग्गा उपहार !
१४ पुष २०७७, मंगलवार ११:१७ admin	0
यी २२ बर्षीय युवकका ३ वटा श्रीमती, ३ वटी मिलेर खोज्दैछन चौथी सौता ( भिडियो सहित )
७ मंसिर २०७७, आईतवार ०३:३९ admin	0